I-Oceanfront 2 igumbi lokulala eline-pool, i-Ocho Rios
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguJeremy
Buyela emva kwaye uphumle kule ndawo izolile, enesitayile sokulala i-2 ye-Condo kulwandle kunye nedama elingapheliyo. Simalunga nemizuzu emi-5 empuma yeOcho Rios kwaye kumgama wokuhamba ukuya kwindawo yokutyela yaseSummerhouse, iziko lejerk lendawo kunye nebha, indawo yokutyela yase-PG yaseTaliyane kunye nevenkile yokutya.
Igqitywe ekwindla ka-2021 oku kukhanya kuvulekileyo kunye nendawo eqaqambileyo enefenitshala ekhethekileyo yesiko ivula iveranda ngokujonga ichibi lokuqubha kunye nolwandle.
Akukho nto ifana nokuvuka kwisandi samaza nokubukela ilanga liphuma phezu kolwandle. Ukuchitha imini ngaseLwandle kwaye ubukele ukutshona kwelanga konke ukwiveranda yakho yeyona ndlela inoxolo yokuchitha iholide.
Ndihlala ndifumaneka ngo whatsapp okanye ngomnxeba kodwa njengokuba ndihamba island wise xa ndiphangela ndingasoloko ndikhona ukuze ndidibane buqu.